ခြောက်သွေ့သောနာနတ်သီးပန်းများနှင့်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ - အချက်အပြုတ်နည်းစနစ်
ဒီလှပတဲ့ပန်းလေးဟာနာနတ်သီးကနေလုပ်ထားတာကိုသင်ယုံကြည်နိုင်ပါသလား။ ငါရိုးသားပါလိမ့်မယ်, ငါပထမ ဦး ဆုံးမှာဒီ technique ကိုအကြောင်းကိုသံသယဖြစ်ခဲ့သည်! ဒါပေမယ့်တကယ့်ကိုတကယ်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်၊
ဤရွေ့ကားနာနတ်သီးပန်းပွင့်, chewy ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်အရသာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါ့သမီး Avalon ရဲ့ Moana-themed မွေးနေ့ပါတီများအတွက်ပြီးပြည့်စုံမယားစကားအလှဆင်ခဲ့ကြသည်။
ခြစ်ရာကနေ vanilla bean ကိတ်မုန့်ချက်ပြုတ်နည်းများ
ငါကြီးပြင်းလာတဲ့အခါအသီးများစွာခြောက်သွေ့စေသည်။ ကျွန်တော့်အဖေကနယူးဇီလန်မှာရှိတဲ့လယ်ယာတစ်ခုမှာကြီးပြင်းလာတာကြောင့်အစားအစာကိုစည်သွတ်ဘူးတာတွေ၊ အေးခဲစေတယ်။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးသစ်သီးခြောက်ကတော့ပန်းသီးတွေပါ။ စတိုးဆိုင် ၀ ယ်သည့်ပစ္စည်းထက်အမြဲတမ်းချို။ နူးညံ့မှုရှိသည်။
ကျွန်တော့်အဖေကသူကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့သစ်သားရေခန်းခြောက်ကြီးရှိပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းငါတို့တတ်နိုင်သမျှအသီးအနှံတွေစုဆောင်းတယ်၊ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းတွေနဲ့ခြောက်သွေ့တဲ့အသီးတွေပေါ်မှာဖြန့်တယ်။ သင်သည်ငါတို့၏အိမ်မှလမ်းတစ်လျှောက်ရှိချိုမြိန်သောအမွှေးအကြိုင်များကိုရက်သတ္တပတ်များစွာသင်အနံ့ခံနိုင်သည်။
ငါမုန့်ညက်အဖြစ်အသီးအများကြီးသွေ့ခြောက်ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ငါ့သမီးအသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှသူမလုပ်ချင်ပေမယ့်အစာစားရန်လိုလားသောအရာသို့ပိုမိုရွေ့လျားခဲ့ကြရတယ်။ ဒီတော့ပီပီပြင်ပြင်ကိတ်မုန့်တွေကိုတစ်ခါတလေလမ်းဘေးမှာနေရာယူထားရတယ် အိမ်လုပ် gummies , ချောကလက် chip ကို muffins နှင့် သကြား cookies များကို ။
သူနှင့်အတူ Moana ရေးရာမွေးနေ့ တက်လာမယ့်ငါသူမ၏ပါတီများအတွက်ချစ်စရာခြောက်သွေ့တဲ့နာနတ်သီးပန်းပွင့်ကိတ်မုန့်အောင်အောင်ခုခံနိုင်ဘူး!
နောက်ဆုံး၌၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၎င်းသည်လုံးဝထိုက်တန်သည်! အဆိုးရွားဆုံးအပိုင်းမှာနာနတ်သီးမှ“ မျက်စိ” ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းသာဖြစ်သည်။
နာနတ်သီးစူပါပါးပါးကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၏ဆွဲကြိုးကိုရယူရန်လည်းခဏကြာခဲ့သည်။ ငါကိုယ်တိုင်ပိုခက်ခဲအောင်လုပ်ပြီးမှည့်သောနာနတ်သီးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အရည်ရွှမ်း။ ပျော့ပျောင်းသည်။ သငျသညျ crisper ပန်းပွင့်ချင်လျှင်ငါတစ် ဦး လျော့နည်းမှည့်သောနာနတ်သီးကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ပန်းတွေကိုရေခန်းခြောက်စေတဲ့အတွက်စပျစ်သီးကောင်းတဲ့နာနတ်သီးမလိုအပ်ပါဘူး။
စိတ်မပူပါနှင့်, နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နာနတ်သီးပန်းပွင့်ငြင်းပယ်အစာစားခြင်းပျော်မွေ့! သငျသညျလည်းလိုက်တယ် - ရှာဖွေနေအပိုင်းပိုင်းခန်းနှင့်ကျန်းမာရေစာအဖြစ်သူတို့ကိုသုံးနိုင်သည်။ yum!
အဓိကထွက်ယူမထားပါနဲ့။ ထိုလှပသောနာနတ်သီးပန်းများကိုပြုလုပ်ရန်သင်နဂိုအတိုင်းဗဟိုလိုအပ်သောကြောင့်အပြင်ဘက်အရေပြားကိုဖယ်ရှားရန်နာနတ်သီး corer ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
စုတ်ပြဲအနားစိုးရိမ်မနေပါနဲ့။ သင့်ရဲ့အချပ်အနည်းငယ်စုတ်ပြဲရှာနေအဆုံးသတ်လျှင်, ဒါကပဲပန်းပွင့်များ၏ခြုံငုံကြည့်ဖို့ထပ်ပြောသည်။
နာနတ်သီးတဝိုက်မျက်လုံးများကိုဖယ်ရှားရန်အာလူးခွံကိုသုံးပါ။ ဒါက ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာတယ်။
နာနတ်သီးအချပ်များကိုဆီလီကွန်မုန့်ဖုတ်ဖျာဖြင့်ကပ်ထားသောကပ်ဘေးကို ကပ်၍ ကပ်ထားခြင်းမှကာကွယ်ရန်
မိနစ် ၉၀ ဖုတ်ပါ (သူတို့အနားပတ်ပတ်လည်အညိုရောင်သို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့နေပုံမပေါက်လျှင် ပို၍ ဖြစ်သည်) ။ သူတို့ကိုမိနစ် ၆၀ အပြီးလှန်လိုက်ပါ။
ပြီးတာနဲ့ခြောက်ပြီး, သူတို့ကို cookie ကိုစာရွက်ထဲကနေဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အခန်းအပူချိန်မှာနေ့ချင်းညချင်းခန်းခြောက်ဖို့မယားစကားဖြူထဲသို့ထားလေ၏။
တောင်ပိုင်းမုန့်ဖုတ်များသည်ပင့်ကူပန်းများကိုပျားပန်းကိတ်မုန့်အတွက်လူကြိုက်များသောအလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ Hummingbird cake သည်မုန်လာဥနီနှင့်တူသော်လည်းမုန်လာဥနီမပါဘဲ။ ဒါဟာမုန့်ဒိန်ခဲအေးခဲခြင်းနှင့်တွဲတကယ်အရသာပါပဲ။
ခြစ်ရာစာရွက်ကနေစိုစွတ်သော vanilla ကိတ်မုန့်
ကိတ်မုန့်၊ ကိတ်မုန့်နှင့်အခြားအချိုပွဲများကိုအလှဆင်ရန်နာနတ်သီးပန်းများကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သူတို့ကအရမ်းလှတယ်!
နာနတ်သီးပန်းများသည်သူတို့ကိုကြာကြာမထားခဲ့လျှင် floppy နှင့် soft ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုအခန်းအပူချိန်တွင်လေလုံကွန်တိန်နာတစ်ခုတွင်သုံးရက်ခန့်သိမ်းဆည်းထားပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်ခဏကြာသည်။
ခြောက်သွေ့သောနာနတ်သီးပန်းများသည်အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ လတ်ဆတ်သောနာနတ်သီးကိုအခွံခွာပြီးမီးဖိုပေါ်ရှိအချပ်များကိုခြောက်သွေ့ပြီးမင်ကိတ်မုန့်ဖြင့်ပုံဖော်ပါ။ ဒီနာနတ်သီးပန်းတွေကိတ်မုန့်တွေ၊ ပြင်ဆင်ချိန် -နှစ်ဆယ် မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၁ နာရီ ၃၀ မိနစ် ခြောက်သွေ့၃ နာရီ
▢၁ အလယ်အလတ် နာနတ်သီး မမှည့်ဘူး
သင့်ရဲ့မီးဖို 225 ဒီဂရီအက်ဖ်မှအပူ။
စားဖိုမှူးတစ် ဦး ၏ဓါးဖြင့်နာနတ်သီး၏ထိပ်နှင့်အောက်ကိုဖြတ်လိုက်ပါ။
နာနတ်သီး၏ဘေးထွက်တွင်ပါးလွှာသောအချပ်များကိုဖြတ်ပါ။ သင်ရနိုင်လေလေ၊ သင်၏ပန်းများသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့လေဖြစ်မည်။
နာနတ်သီးအချပ်များကိုစက္ကူလက်သုတ်ပုဝါပေါ်တွင် တင်၍ အစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားရန်ခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်ပါ။
နာနတ်သီးအချပ်များကိုဆီလီကွန်ဖျာဖြင့်ချကာမုန့်ဖုတ်ထားသောစာရွက်ပေါ်တွင်မိနစ် ၉၀ ခန့်ထားပါ။
မင်းဘယ်လို gummy သကြားလုံးလုပ်သလဲ
ပန်းပုထုပ်ဖို့ဆန် krispie ဆက်ဆံမှုစာရွက်